“Haaland Maaha Ciyaartoygayga Laakiin…….” Zinadine Zidane Oo Ka Hadlay Mucjisada Dortmund Ee Lala Xidhiidhinayo – Laacibnet.net
“Haaland Maaha Ciyaartoygayga Laakiin…….” Zinadine Zidane Oo Ka Hadlay Mucjisada Dortmund Ee Lala Xidhiidhinayo
Macalinka kooxda Real Madrid ee Zinadine Zidane ayaa soo hadal qaaday weeraryahanka kooxdiisa dhawaan lala xidhiidhiyay ee Erling Haaland oo ka tirsan Borussia Dortmund balse la sheegay inuu liiska rabitaanka Real soo geli doono.
Real Madrid ayaa doonaysa saxeexa weeraryahan dhexe oo No.9 ah si ay ugu dambayn u bedesho Karim Benzema waxaana uu Zidane si cadaan ah u sheegay in Haaland oo lala xidhiidhinayaa uu yahay mid wanaagsan.
Haaland ayaa xulka qaranka Norway wacdarro kusoo dhigay intii fasaxa kulamada caalamiga ah lagu jiray waxaana ay kulankii Romania ay 4-0 kaga adkaadeen bandhig weyn soo wada sameeyeen Martin Odegaard oo Real Madrid ka tirsan.
Zidane ayaa sheegay in Odegaard oo uu kulankaas ka hadlayay uu shax ka duwan midiisa Real Madrid ciyaartaas kusoo ciyaaray halka uu Haaland oo uu ka hadlay ku tilmaamay ciyaaryahan wanaagsan.
Zizou oo ka hadlayay kahor kulanka Cadiz ee La Liga ayaa yidhi “Martin waxa uu u ciyaaray si waxyar ka duwan oo af saf afar ah (shaxda 4-4-2 ee afarta khad dhexe leh), Haaland maaha ciyaaryahankayga balse wuu wanaagsan yahay, maxaan odhan karaa?”
Da’yar kale oo weeraryahan ah lalana xidhiidhinayo Real Madrid ayaa ah Kylian Mbappe oo Paris Saint-Germain, 21 sano jirkaas ayaa maalmahan ugu dambeeyay qish soo sameeyay kaddib markii uu qirtay inuu jecel yahay halyeeyada Los Blancos ee Luka Modric iyo Cristiano Ronaldo.
Real ayaa horeba kooxdeeda ugu haysata Luka Jovic oo ay xagaagii 2019 lasoo wareegtay, 22 sano jirka ree Serbia ayaan wixii laga filayay kusoo bandhigin Santiago Bernabeu tan iyo markii uu 62-ka Milyan ee Pound ugu biiray.